Rufu Harusi Mugumo: Dzidza Kubva Kuna Jesu naRazaro (Johani 11)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Bhetani waiva musha muduku waiva makiromita matatu kubva muJerusarema. (Johani 11:18) Mumusha uyu makaitika dambudziko mavhiki mashoma Jesu asati afa. Shamwari yaJesu yepedyo Razaro yakangoerekana yarwara zvakaipisisa ndokufa.
Paakatanga kunzwa nezverufu rwacho, Jesu akaudza vadzidzi vake kuti Razaro akanga arara uye kuti aizoenda kunomumutsa. (Johani 11:11) Vadzidzi vaJesu havana kunzwisisa zvaaireva, saka akavaudza zvakajeka kuti: “Razaro afa.”—Johani 11:14.
Pashure pemazuva mana kubva pakavigwa Razaro, Jesu akasvika kuBhetani, ndokuedza kunyaradza Marita uyo aiva hanzvadzi yemufi. Marita akabva ati, “Kudai makanga muri pano hanzvadzi yangu ingadai isina kufa.” (Johani 11:17, 21) Jesu akapindura kuti, “Ndini kumuka noupenyu. Anotenda mandiri, kunyange akazofa, achava mupenyu.”—Johani 11:25.
Kuti aratidze kuti aitaura chokwadi, Jesu akaenda paguva racho ndokushevedzera kuti: “Razaro, buda!” (Johani 11:43) Vanhu vose vakashamisika kuona murume wacho achibuda ari mupenyu.
Jesu akanga ambomutsa vanhu vasiri pasi pevaviri izvi zvisati zvaitika. Pamwe pacho akamutsa musikana muduku, aiva mwanasikana waJairosi. Ava pedyo nokumumutsa, Jesu akataurawo kuti musikana wacho akanga akarara.—Ruka 8:52.
Ona kuti Jesu paakataura nezvaRazaro uye mwanasikana waJairosi, akafananidza rufu nokurara. Kufananidzira kwacho kwakakodzera. Nei tichidaro? Kana munhu akarara anenge asingatombozivi, uye kurara kunofananidzira zvakakodzera kuzorora kunoita munhu kubva pakurwadziwa uye pakutambura. (Muparidzi 9:5, ona bhokisi rakanzi, “Kufa Kwakafanana Nokurara Usingatomboroti.”) Vadzidzi vaJesu vekutanga vainyatsoziva zvinoitika kana munhu afa. Bhuku rinonzi Encyclopedia of Religion and Ethics rinoti: “Vadzidzi vaJesu vaiona rufu sokurara, uye guva senzvimbo yokuzororera . . . yevaya vainge vafa vari vatendi.” *
Zvinotinyaradza kuziva kuti vakafa havasi kutambura uye vakarara mumakuva. Saka hatichatyi rufu nokuti tava kuziva chokwadi.
“KANA MUNHU AKAFA, ANGARARAMAZVE HERE?”
Kunyange zvazvo tichifarira kuzorora takarara usiku, ndiani wedu angada kurara zvachose? Pane here chinotipa tariro yokuti vaya vakarara mumakuva vachararamazve sezvakaita Razaro nemwanasikana waJairosi?
Jobho akabvunzawo saizvozvo paairwara achinzwa sokuti ava pedyo nokufa. Akati, “Kana munhu akafa, angararamazve here?”—Jobho 14:14.
Jobho akazvipindura mubvunzo wake paakataura nezvaMwari Wemasimbaose achiti: “Muchashevedza, uye ini ndichakupindurai. Nokuti muchasuwa basa remaoko enyu.” (Jobho 14:15) Jobho aiva nechokwadi chokuti Jehovha aida zvikuru kuti zuva rokuti amutse mushumiri wake akatendeka risvike. Uku kwaingova kurotawo zvako kwaJobho here? Kwete.
Kumutswa kwakaitwa vanhu naJesu kunoratidza zvakajeka kuti Mwari akamupa simba rokukunda rufu. Bhaibheri rinototaura kuti Jesu ane “kiyi dzorufu.” (Zvakazarurwa 1:18) Saka Jesu ane simba rokumutsa vakafa kubva mumakuva sezvaakaita Razaro.
Bhaibheri rinotaura kakawanda nezvevimbiso yokuti vakafa vachamutswa. Imwe ngirozi yakavimbisa Dhanieri kuti: “Uchazorora, asi uchazomukira mugove wako pachapera mazuva acho.” (Dhanieri 12:13) Jesu akataura nevaSadhusi, avo vaiva vatungamiriri vechiJudha vairamba kuti vakafa vachamutswa, achiti: “Marasika, nokuti hamuzivi Magwaro kana simba raMwari.” (Mateu 22:23, 29) Muapostora Pauro akati: “Ndine tariro kuna Mwari . . . kuti kuchava nokumuka kwevakarurama nevasina kururama.”—Mabasa 24:15.
VAKAFA VACHAMUTSWA RINI?
Kumutswa kwevakarurama nevasina kururama kuchaitika rini? Ngirozi yakaudza Dhanieri aiva akarurama kuti aizomutswa “pachapera mazuva acho.” Marita aitendawo kuti hanzvadzi yake Razaro “achamuka pakumuka pazuva rokupedzisira.”—Johani 11:24.
Bhaibheri rinoratidza kuti “zuva rokupedzisira” rine chokuita nokutonga kwoUmambo hwaKristu. Pauro akanyora kuti: “Nokuti [Kristu] anofanira kutonga samambo kusvikira Mwari aisa vavengi vose pasi petsoka dzake. Muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu.” (1 VaKorinde 15:25, 26) Izvi zvinotipa chikonzero chakasimba chokuti tinyengetere kuti Umambo hwaMwari huuye uye kuti kuda kwake kuitwe panyika. *
Jobho ainyatsoziva kuti Mwari anoda kumutsa vakafa. Nguva yacho paichasvika, rufu ruchabviswa zvachose. Hapana anozombobvunza kuti, ‘Kana munhu afa zvatopera here?’
^ ndima 8 Shoko rechiGiriki rinoshandurwa kuti “nzvimbo yemakuva” rinoreva “nzvimbo yokurara.”
^ ndima 18 Kuti udzidze zvakawanda nezveUmambo hwaMwari, ona chitsauko 8 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Kufa Kwakafanana Nokurara Usingatomboroti
“Penyesai [isai chiedza] mumaziso angu, kuti ndirege kurara murufu.”—Pisarema 13:3.
“‘Razaro shamwari yedu azorora [arara], asi ndiri kuenda ikoko kunomumutsa muhope.’ Naizvozvo vadzidzi vakati kwaari: ‘Ishe, kana azorora [arara], achapora.’ Zvisinei, Jesu akanga ataura pamusoro porufu rwake.”—Johani 11:11-13.
‘Dhavhidhi, akashumirawo Mwari muchizvarwa chake uye akarara murufu.’—Mabasa 13:36.
“Kristu akamutswa kuvakafa, icho chibereko chokutanga pane vaya vakarara murufu.”—1 VaKorinde 15:20.
‘Hatidi kuti musaziva pamusoro pevaya vakarara murufu; kuti murege kusuruvara sezvinoitawo vamwe vose vasina tariro.’—1 VaTesaronika 4:13.
‘Vakafa venyu vachararama. Zvitunha zvangu zvichamuka. Mukai mushevedzere muchifara!’—Isaya 26:19.
“Vazhinji vakarara muguruva renyika vachamuka.”—Dhanieri 12:2.
“Awa iri kuuya mairi vaya vose vari mumakuva vachayeukwa uye vachanzwa inzwi rake, vobuda.”—Johani 5:28, 29.